Tuesday December, 10 2019 - 05:52:11
Thursday August 08, 2019 - 13:05:56 in by salman abdi
Michael Rubin oo ah Xeel-dheere Millatari iyo khabiirka tirsan Machadka American Enterprise Institute, ayaa Wasaaradda Arrimaha DibaddaMaraykanka u soo jeediyey in aanay ku shaqeynaynin qorshe maangaabnimo ah oo aanay isu dhiibin Siyaasadda Khiyaaliga ah ee Soomaaliya, waxaanu Maraykanka ku boorriyey inay wax la qabsadaanJamhuuriyadda Somaliland oo ah waddanka mid ah dalalka ugu nabdoon, uguna dimuqraadisan Afrika.
Wakaaladda Wararka Somaliland ee SOLNA, ayaa soo xigatay Qormouu Michael Rubin maantaku daabacay Shabakadda Washington Examiner oo uu kagawarbixiyey farqigau dhexeeya Dawladda Somaliland iyo Xukuumadda itaalka daran ee Soomaaliya oo uu sheegay inay ka talisodhul masaafadiisuaad u yar tahayoo ku yaalla badhtamaha Muqdisho.
Khabiir Michael Rubin wuxuu sheegay inMaraykanku uu aqoonsaday Somaliland sannadkii 1960kii, ka hor intii JSL aanay la midoobin Soomaaliya oo ay kala kulmeen xasuuq kaligii taliyihii Siyaad Barre ee ka talin jiray Soomaaliya. Waxa kaloo uu intaas ku darayin Somaliland ay ka baxday midowgii Soomaaliya sannadkii 1991kii, dibnaay ula soo noqotaymadax-bannaanideedii, waxaanu ku sifeeyey Somalilandwaddanka mid ah dalalka ugu dimuqraadisan Afrika, isagoo tusaale u soo qaatayinaynoqotay dalkii u horreeyey ee doorashada ku galay sawirka laga qaadoisha bu’deeda”(biometric iris scans).
Michael Rubin wuxuu xusay in masuuliyiinta Somaliland ay xaqiijiyeen in Shirkadaha Shiinuhu ay doonayaan inay la galaanheshiisyo macdanneed, hase ahaatee Somaliland ay doorbidayso inay la shaqeeyaan Maraykanka iyo dalalka Yurub, kuwaasi oo taageerayadawladda khiyaaliga ah ee Muqdisho. Waxaanu ku doodayin shirkadaha Maraykanka ay ka baaqsadeeninay heshiisyo gaar ah la galaan Dawladda Somaliland, waxaanu carabka ku dhuftay in Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanku ay iska indho-tirayso xaqiiqada ka jirta Geeska Afrika
Michael Rubin wuxuu sheegay inay Somaliland noqotay meel laga helayo macdanaha naadirka ah ee laga sameeyo qalabka Elektarooniga casriga ah, waxaanu tilmaamay inay leedahay khayraad kala duwan oo xooluhu ka midyihiin.
Khabiirkaasi wuxuuka biyo diidayin dawladda Maraykanku lacagobadan gelisay Soomaaliya oo aanay ka jirin nabadgelyo, isla markaana 14kii sannadood ee la soo dhaafay ku guulaystay horyaalka Musuqmaasuqa Adduunka,oosi toddobaadle ayuga dhacaan falal argagixiso.
Waxa kaloo uu iftiimiyey inMaraykanku maalgeliyo Soomaaliya ooqandaraasyo badan siisa Shiinaha, waxaanu ku adkaystayin siyaasadda Dawladda Maraykanku aanay ku salaysnayn masaalixda dalkaas.